VITAMIN B2: SIDA LOO AQOONSADO YARAANTA OO LAGA TAKHALUSO? - BEERAHA DIGAAGA
Waa maxay khatarta fitamiin A ee yaraanta digaagga iyo sababta ay shimbirta u badasho?
Wax qarsoodi ah maaha in qof kasta uu cudurku ku dhaco. Laga soo bilaabo dhirta ilaa xoolaha iyo dadka. Waxaana lagama maarmaan ah in lala dagaallamo isla markiiba ka dib marka la ogaado calaamadaha iyo cudurka cudurka.
Laakiin, si kastaba ha ahaatee, waxaan kugula talinaynaa akhristayaasha in aysan is-daweynin, iyo haddii ay dhacdo in lagu ogaado cudurka ku jira xayawaankaaga la jecel yahay, la xariir takhasusle.
Hase yeeshee, inta jeer ee aynu bilawno dhawaaqa qeylo-dhaanta, ma aragno calaamadaha cabsida leh, xitaa ha u maleyneynin in sababtu ay noqon karto beriberi, taas oo aan adagtahay in laga hortago.
Xaaladaha noocaas ah, maqaalkani waa ku habboon yahay. Akhristayaasha waxaa loo sheegi doonaa sida loo aqoonsado cudurka, sida loo daweeyo iyo sida looga hortago.
Waa maxay vitamin B2 in yaraanta digaagga?
Avitaminosis waa cudur uu keeno la'aanta fiitamiinada ee jirka. Faytamiin B2 - fitamiin biyo ah, waa shaybaar siyaabooyin badan oo biochemical ah.
Sidaa darteed Faytamiin la'aantu waa yaraanta fiitamiin B2 ee jirka, marka la eego macnaha guud, ee jirka digaaga, inkastoo, dabcan, waxaa sidoo kale laga helaa xayawaanka iyo shimbiraha kale.
Taas waa, waa in maskaxda lagu hayo in aaney haysan kaliya dadka digaagga ah ee dhibaatada haysta ay la kulmi karaan dhibaatadan, laakiin sidoo kale kuwa ku faraxsan ee noocyada kale ee shimbiraha gudaha, haddii ay yihiin ducks, turkeys ama bare.
Vitamin yaraanta B waxay saameyneysaa dhammaan noocyada shimbiraha, gaar ahaan xayawaanka yaryar.
Heer qatar ah
Fitamiinka waxaa la helay 1879-kii, waxaa laga soocay serum, waxayna u egtahay midab huruud ah.
Wakhti dheer ma ogaanin faa'iidooyinka fitamiinkan, ilaa ay caddaynayso in dhammaan shaqooyinka casriga ah waxaa kaliya oo sabab u ah vitamin B2 iyada oo aan lahayn, vitamin B ma shaqayn doonto.
Sidaa darteed, tusaale ahaan, waxay ka qayb qaadataa fosforyaalka oksidifka iyo neefsiga unugyada. Faa'iidada xitaa labadan dhibcood waa cad.
Cudur kasta waa in la daweeyo. Haddii avitaminosis ay si lama filaan ah u muuqato digaaga, ma joojin kartid adigana u ogolaato inaad la qabsato cudurka.
Dabcan, boqolkiiba dhimashada sababtoo ah yaraanta vitamin kasta waa ay yar tahay, laakiin xaaladda sii xumaatay, isbedelka sawirka daaweynta sidoo kale maaha cawaaqib wanaagsan.
Gaar ahaan calaamadaha iyo cawaaqibta fitamiin B waa curyaannimo, curyaaminta, korriinka korriinka, shubanka, dhalmo la'aanta iyo qaar kale, sawirka kiliinikada ayaa laga hadli doonaa mar dambe.
Si fudud u dhig, vitamiin muhiim ah ayaa ku lug leh geedi socodka nolosha, tusaale ahaan, waxay ka qaybqaadataa nuugista dufanka, carbohydrateska iyo borotiinka.
Legbarov Lakin Cunto Qaar ka mid ah jacaylka waxay u dhigantaa naas nijis ah sababtoo ah tuft.
Maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharaxayaa sida loola baxo orchid ka dib ubax.
Caadi ahaan, avitaminosis-ku ballaaran ayaa ku dhacda shimbiraha iyo xayawaanka ku jira wakhtiyada qalalan ama aad u badan, marka dhammaan cuntooyinka cuntada ee suurtogalka ah ama gubashada hoosta qoraxda qorraxda, xaaladaha noocaas ah mulkiiluhu wax kuma qaban karo dhibaatooyinka.
Laakiin marka sababtu ay tahay mid si aan caadi ahayn u sabab ah badeecadaha tayada liidata ama nafaqo la'aanta - markaa caafimaadkaaga shimbirahaagu wuxuu ku jiraa gacmahaaga.
Sidii hore loo sheegay, sababtu waa la'aanta fiitamiin B2 ee shimbirta jirka, sida caadiga ah, sababtoo ah cunto aan habooneyn oo loo sameeyay qaab digaag ah.
Sababaha isku midka ah ee cudurku wuxuu noqon karaa kor u qaadista ukunta, kordhinta cuntooyinka oo kordhiyey borotiinka iyo dufanka, heerkulka hawada oo hoos u dhacda, marka la barbardhigo heerarka cimilada.
Xaaladahan oo kale, waxaa jira baahi loo qabo in la kordhiyo fitamiin, haddii aysan ku qanacsanayn, digaaggu way jirran karaan.
Koorsada iyo calaamadaha
Tixgeli calaamadaha marka hore.:
hoos u dhaca ama xitaa lumitaanka cuntada;
soosaarka ukunta oo yaraaday;
daciifnimada lugaha (lebbiska wuxuu bilaabmaa inuu u dhaqaaqo qaybaha metatarsal);
faraha isku dhejinta;
maqaarka maqaarka iyo qoorta (nabarrada ha bogsan);
paws ay u kala baxaan dhinaca;
jilicsanaan iyo luminta baalasha;
shanlooyinka iyo hilqadaha;
dadka waaweyn, chicks waxay ku dhasheen baal miro leh.
Cudurku si tartiib ah ayuu u kobcayaa. Tusaale ahaan, marka uu yar yahay (digaagga) Yaraanta Riboflavin ayaa soo baxaysa oo keliya maalinta 14-30 maalmood ee beerashadaDhammaantood waxay ku bilaabataa hoos u dhac ku yimaada rabitaanka cuntada iyo daciifnimada, habdhaqanka noocan oo kale ah ayaa si fudud ugu wareersan daal ama wax ka yar yaraanta vitamin-ka.
Dheeraad ah, daciifnimada lugaha ayaa horay loo soo bandhigay, kaddibna shimbirta ayaa bilaabmeysa in ay u dhaqaaqdo agagaarkeeda, mugdiga mugdiga ayaa la xusi karaa.
Sida ugu dhakhsaha badan calaamadaha avitaminosis waa la ogaadaa, isla markiiba waa lagama maarmaan in la bedelo cuntada digaaga ama digaagga (sida kor ku xusan), avitaminosis ee riboflavin ayaa saameeya marar badan, sidaa daraadeed waxa fiican in la daawado lowska gaar ahaan si adag), isaga oo ku daraya waxyaabaha muhiimka ah, o taas oo lagaga wada hadlayo hoos.
Waxaa lagu talinayaa in lagu ogaado cudurka ku salaysan calaamadaha kor ku xusan, taas oo ah, iyada oo ku saleysan sawirka kiliinikada, haddii aadan hubin gabagabadaada, waxaa lagula talinayaa inaad la xiriirto takhasus uu qabanayo Daraasado muhiim ah oo wuxuu kuu sheegi karaa waxa shimbirtu bowdada ku taal.
Sida kor ku xusan, qaabka ugu weyn ee daaweynta waa in la beddelo nafaqada shimbirta.
Tiro cuntooyin ah waa in lagu daraa cuntada.:
løvetann iyo caleemo qoyan;
Waxa kale oo aad u jeedin kartaa helitaanka xoolaha taajirta ah ee fiitamiin B2, waa in aynaan sidoo kale iloobin in fitamiin loo baahan yahay oo kaliya maaha oo kaliya digaaga laf ahaantiisa, laakiin sidoo kale farirkiisa, sidaas awgeed laguma talin karo in uu ku faafo jeermiska qamadiga.
Waxaa loo ogol yahay isticmaalka iyo dheellitirka fiitamiin B2 (ee warshadaha, sida caadiga ah, riboflavin waxaa laga helaa iyada oo loo marayo kiimikada kiimikada ribose iyo 3,4-dimethylaniline, marar badan ayaa loo isticmaalaa jeermiska jeermiska lagu bedelo.
Sida caadiga ah, ka-hortagga waxay ka kooban tahay isticmaalka caadiga ah sida digaagga cuntooyinka sare ee fiitamiin B2 (liiska kor ku xusan) ama marka heerka borotiinka ee digaaga digaaga la kordhiyo.
Badeecooyinkaas, fitamiin ma aha oo kaliya ku jira tiro badan, laakiin sidoo kale waa mid si fudud loo qaadi karo, taas oo kor u qaadaysa suurtogalnimada in uu galo jirka digaaga oo leh waxtarka sare.
Dhaqdhaqaaqa Tsarskoye Selo ayaa dhab ahaantii haysta muuqaalka boqortooyada. Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso boggayaga internetka adoo gujinaya cinwaanka kor ku xusan!
Ka taxadar xayawaankaaga! Waxaad ka baran kartaa cawaaqibka ka yimaada b1 avitaminosis ee digaagga halkan: //selo.guru/ptitsa/kury/bolezni/narushenie-pitaniya/avitaminoz-b1.html.
Aan soo koobno ​​baaritaankeena. Iyadoo lagu saleynayo maqaalkan, si fudud ayaad u sheegi kartaa in yaraanta Vitamin B2 ay fududahay cillad aan xirfad lahayn iyo cawaaqibkeeda, haddii aysan gaarin marxaladda muhiimka ah, ayaa la beddeli karaa oo keliya isbedelka hoose ee cuntada, waxaana jira waxyaabo badan oo ah waxyaabaha muhiimka ah, taasoo hoos u dhigeysa heerka dhibaatada ka dhalan karta wax ka qabashada cudur aan fiicneyn.
Hase ahaatee, way fiicantahay haddii aad bilowdo ka hortagga beriberi waqtigeeda, xayawaankuna waa mid caafimaad qaba, mana aha inaad wax ka qabato calaamadaha kor ku qoran. Ha xanuunsan oo kalsooni iyo caafimaad ku hay xayawaankaaga.